Orinasa vokatra vaovao - Mpanamboatra vokatra vaovao any Shina, mpamatsy
Rivet jamba mahazatra
Rivet jamba manokana
Rivet jamba vita amin'ny tombo-kase Aluminium
Flat Head Full Hexagonal Body Rivet Nut fampidirana
Rivet Nut Countersunk Knurled Open End famaritana
Fampidirana Riveterin'ny tanana avo roa heny
Fampidirana basy tanana tokana
Rivet Nuts kofehy fampidirana
Ity Nut sert ity dia manome tanjaka bebe kokoa amin'ny lavaka totohondry sy totofana .Ny vatana mikodiadia dia manome fanoherana ambony kokoa ny famolavolana rehefa apetraka amin'ny fitaovana malefaka.
Rivet farany vy mihidy vy
Ny rivet mihidy dia karazana fastener jive taolana vaovao. Ny rivet mihidy dia tsy ny toetra mampiavaka ny fampiasana mora foana, ny fahombiazan'ny avo, ny tabataba ambany, ny fihenan'ny asan'ny mpiasa ary ny sisa, fa koa ny toetra mampiavaka ny mpampifandray tsara ary tsy misy harafesina ao amin'ny vovo-keloky ny rivety mihidy aorian'ny riveting .
Rivet vita amin'ny alimina mihidy miaraka amin'ny Mandrel vy
Parameter teknika Item: Countersunk Open End Blind POP Rivets fitaovana: Aluminium .Steel. Stainless vy Finsh: poloney .zinc nopetahany fonosana fonosana: fonosana boaty, fonosana lehibe .na fonosana kely. Teny lehibe: Countersunk Open End Blind POP Rivets marika: YUKE Package & loading Wuxi yuke environment science & technology co., Ltd dia mpanamboatra matihanina amin'ny rivet jamba, rivet jamba mora vidy, rivet jamba mahazatra, rivet jamba manokana.
Rivetin'ny jamba pop tampoka mihidy
Ny rivet jamba mihidy dia karazana fastener jive jamba. Ny rivet mihidy dia tsy ny toetra mampiavaka ny fampiasana mora foana, ny fahombiazan'ny avo, ny tabataba ambany, ny fihenan'ny asan'ny mpiasa ary ny sisa, fa koa ny toetra mampiavaka ny mpampifandray tsara ary tsy misy harafesina ao amin'ny vovo-keloky ny rivety mihidy aorian'ny riveting .
Rivetin'ny bokotra vy
Ny rivet dia misy rivet vita amin'ny rivet vita amin'ny kodiarana manana lohany efa namboarina mialoha amin'ny lafiny iray; Tsanganana lehibe misy ny lohany sy ny tsanganana fototra misy vozony mora vaky miala amin'ny loha.
Rivet jamba jamba Tri
Ny Tri Bulb Rivets dia karazana rivet manokana. Matetika izy ireo dia antsoina hoe rivets mipoaka noho ny fomba fivelarany, ary koa ny tri tite, bulb tite, ary rivet olympic. Ireo rivet ireo dia misy notch telo manapaka ny vatan'ny rivet. Izy ireo dia apetraka toy ny pop rivet, amin'ny fampiasana riveter hisintona ny mandrel mankany amin'ny satroka.